Gudoomiye Shuute oo digniin adag u diray Saraakiisha Ciidanka Galmudug - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Gudoomiye Shuute oo digniin adag u diray Saraakiisha Ciidanka Galmudug
Gudoomiye Shuute oo digniin adag u diray Saraakiisha Ciidanka Galmudug
Gudoomiyaha Maxkamada darajada Koowaad ee Ciidanka Qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ayaa uga digay Saraakiisha Ciidanka in ay ka qeyb qaataan dagaal beeleedyada ka dhaca degaanada maamulka Galmudug.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Maxkamada Ciidanka ay si adag ula xisaabtami doonto cidwalba oo lagu helo in ay ka qeyb qaatay falal ka baxsan mida uu ogol yahay sharciga.
Waxaa uu sheegay in Maxkamada Ciidanka laga hirgaliyay degaanada maamulka Galmudug si loola xisaabtamo Saraakiisha.
Waxaa uu sidoo kale ku eedeeyay in aysan wali qaadin tilaabo loogu aargudayo Saraakiishii Ciidanka Galmudug ee Qaraxa lagu dilay.
Wafdiga Gudoomiyaha waxaa ka mid ah Wasiirka Difaaca iyo Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Ciidanka Qalabka sida.
Previous articleGalmudug oo ku dhawaaqday Shir dib u heshiisiin ah
Next articleMidowga Musharaxiinta oo kormeeray daljika Dahsoon oo berri uu ka dhici doono Banaanbax weyn